Bit By Bit - नीतिशास्त्र - 6.4.4 कानून र सार्वजनिक ब्याज आदर
कानून र सार्वजनिक ब्याज आदर सबै सान्दर्भिक stakeholders समावेश गर्न विशेष अनुसन्धान सहभागीहरू परे Beneficence को सिद्धान्त विस्तार गर्दछ।
आफ्नो सोचाइ डोऱ्याउन सक्ने चौथो र अन्तिम सिद्धान्त कानून र सार्वजनिक ब्याज आदर छ। यस सिद्धान्तलाई मेन्लो रिपोर्ट आउँछ, र यसैले कम राम्रो सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले थाह हुन सक्छ। यो मेन्लो रिपोर्ट व्यवस्था र सार्वजनिक ब्याज आदर सिद्धान्त Beneficence को सिद्धान्त मा निहित छ भन्ने तर्क छ, तर मेन्लो रिपोर्ट स्पष्ट विचार गर्नुपर्छ भनेर तर्क छ। मेरो मनमा, यो सिद्धान्त सोच्न सर्वोत्तम मार्ग Beneficence सहभागीहरू ध्यान केन्द्रित गर्न tends र कानून र सार्वजनिक ब्याज लागि भनेर आदर स्पष्ट एक व्यापक दृष्टिकोण लिन र आफ्नो विचार मा व्यवस्था समावेश गर्न अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रोत्साहन छ। एनालग उमेर अनुसन्धान-यस्तो परम्परागत सर्वेक्षण र प्रयोगशाला रूपमा प्रयोगहरू-अनुसन्धानकर्ताहरूले गल्ति व्यवस्था तोड्न असम्भाव्य थिए। अनलाइन अनुसन्धान मा, यो, छ दुर्भाग्य, धेरै कम साँचो।
(1) अनुपालन र (2) पारदर्शी आधारित उत्तरदायित्व: को मेन्लो रिपोर्ट मा, कानून र सार्वजनिक ब्याज आदर दुई भिन्न घटक छ। अनुपालन अनुसन्धानकर्ताहरूले सान्दर्भिक व्यवस्था, अनुबंध, र सेवाका सर्तहरू पहिचान र पालन गर्ने प्रयास भन्ने हो। उदाहरणका लागि, अनुपालन एक शोधकर्ता एक वेबसाइट सामग्री पढ्न र वेबसाइट को सर्तहरू-को-सेवा सम्झौता विचार गर्नुपर्छ scraping विचार मतलब थियो। त्यहाँ तथापि, जहाँ यो सेवा सर्तहरू उल्लंघन गर्न गर्न दिईने छ परिस्थितिमा हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक समयमा भेरिजोन र एटी एन्ड टी दुवै सेवा सर्तहरू तिनीहरूलाई आलोचना देखि ग्राहकहरु रोकियो कि थियो (Vaccaro et al. 2015) । अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वतः यस्तो सर्तहरू-को-सेवा सम्झौताहरू द्वारा बाध्य हुनुपर्छ। आदर्श, अनुसन्धानकर्ताहरूले सेवा सम्झौताहरू सर्तहरू उल्लङ्घन भने, तिनीहरूले आफ्नो निर्णय खुल्लमखुल्ला बताउन (जस्तै, गर्नुपर्छ Soeller et al. (2016) )। तर, यो खुलापन थपियो कानुनी जोखिमको अनुसन्धानकर्ताहरूले पर्दाफास हुन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका मा, उदाहरणका लागि, कम्प्यूटर ठगी र दुरुपयोग ऐन यसलाई अवैध सेवा सम्झौताहरू सर्तहरू उल्लङ्घन बनाउँछ (Sandvig and Karahalios 2016) ।
यसबाहेक, पारदर्शिता आधारित उत्तरदायित्व शोधकर्ताओं लक्ष्य, विधि र आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रिया सबै चरणमा परिणामहरू बारे स्पष्ट हुन र तिनीहरूको कामले लागि जिम्मेवारी लिन आवश्यक भन्ने हो। यो पारदर्शिता आधारित उत्तरदायित्व सोच्न अर्को तरिका यो मा गोप्य कुराहरू गर्नदेखि अनुसन्धान समुदाय रोक्न प्रयास गरिरहेको छ भन्ने छ। यो पारदर्शिता आधारित उत्तरदायित्व दुवै नैतिक र व्यावहारिक कारण महत्त्वपूर्ण छ जो अनुसन्धान समुदाय र नैतिक बहस मा सार्वजनिक लागि फराकिलो भूमिका सक्षम बनाउँछ।
यी तीन अध्ययन गर्न कानून आदर र सार्वजनिक ब्याज को सिद्धान्त लागू यसलाई व्यवस्था गर्न आउँछ जब जटिलता अनुसन्धानकर्ताहरूले केही सामना देखाउँछ। उदाहरणका लागि, Grimmelmann (2015) भावनात्मक Contagion यूनाइटेड को राज्य मा कानुन अन्तर्गत अवैध हुन सक्छ कि तर्क छ। खासगरी, मेरील्याण्ड हाउस बिल 917, 2002 मा पारित, साधारण नियम सुरक्षा मेरील्याण्ड सञ्चालन सबै अनुसन्धान, कोष स्रोत स्वतन्त्र (सम्झने किनभने यो सञ्चालन भएको थियो धेरै विशेषज्ञहरु भावनात्मक Contagion संघीय व्यवस्था अन्तर्गत साधारण नियम अधीनमा थियो भन्ने विश्वास गर्छन् कि विस्तार फेसबुक, अमेरिकी सरकारबाट अनुसन्धान कोष प्राप्त नगर्ने संस्था) मा। तर, केही विद्वानहरूको यूनाइटेड हाउस बिल 917 नै असंवैधानिक छ भन्ने विश्वास गर्छन् [ Grimmelmann (2015) ; पी। 237-238]। अभ्यास सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले न्यायाधीशहरूले छैनन्, र यसैले बुझ्न र सबै 50 अमेरिकी राज्य को व्यवस्था को संवैधानिकता आकलन गर्न सुसज्जित छैन। यी जटिलताओं अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा ​​compounded छन्। Encore, उदाहरणका लागि, जो कानुनी अनुपालन अविश्वसनीय गाह्रो बनाउँछ 170 देशहरूमा देखि सहभागीहरू संलग्न। यो अस्पष्ट कानुनी वातावरण प्रतिक्रिया, अनुसन्धानकर्ताहरूले कानुनी आवश्यकता बारे सल्लाह स्रोत र उनको अनुसन्धान थाहै नपाई अवैध छ मामला मा एक व्यक्तिगत सुरक्षा दुवै रूपमा, आफ्नो काम को तेस्रो-पक्ष नैतिक समीक्षा undergo होसियार हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, सबै तीन अध्ययन पारदर्शिता आधारित उत्तरदायित्व सक्षम शैक्षिक पत्रिकाहरूमा आफ्नो परिणाम प्रकाशित। वास्तवमा, भावनात्मक Contagion अनुसन्धान समुदाय र फराकिलो सार्वजनिक जानकारी-पछि थिए त वास्तवमा-बारेमा डिजाइन र अनुसन्धान को परिणाम खुला पहुँच प्रकाशित भएको थियो। आकलन गर्न औंठी को एक नियम पारदर्शिता आधारित उत्तरदायित्व आफैलाई सोध्नु हो: मेरो अनुसन्धान प्रक्रियाहरु मेरो घर शहर अखबार को सामने पृष्ठमा बारेमा लेखिएका थिए भने म सहज हुनेछ? जवाफ कुनै छ भने, आफ्नो अनुसन्धान डिजाइन परिवर्तन आवश्यक छ कि एक बलियो साइन छ।
कानून र सार्वजनिक ब्याज लागि व्यक्ति, Beneficence, न्याय आदर, र आदर: निष्कर्षमा मा, बेलमोन्ट रिपोर्ट र मेन्लो रिपोर्ट चार अनुसन्धान आकलन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रस्तावित। अभ्यास यी चार सिद्धान्तहरू लागू सधैं सरल छ, र यो कठिन संतुलन सक्छ। उदाहरणका लागि, भावनात्मक Contagion देखि सहभागीहरू debrief गर्न चाहे निर्णय गर्दा, व्यक्तिका लागि आदर debriefing (को debriefing नै हानि के थियो भने) Beneficence debrief निरुत्साहित हुन सक्छ जबकि प्रोत्साहन हुन सक्छ। यी प्रतिस्पर्धा सिद्धान्तहरू सन्तुलनमा कुनै स्वचालित तरिका हो, तर एक न्यूनतम मा, चार सिद्धान्तहरू डिजाइन अनुसन्धान गर्न, र प्रत्येक अन्य र सामान्य आफ्नो तर्क व्याख्या गर्न अनुसन्धानकर्ताहरूले सक्षम, स्पष्ट व्यापार-ओफ मदत परिवर्तन सुझाव।